Wararka Maanta: Talaado, July 10, 2012-Abaanduulaha Ciidamada Xoogga Soomaaliya oo sheegay in qofkii dil geysta agu dili doono halka uu dilka ku geystay
Jen. Dhego-badan ayaa hadalkan ka sheegay kulan ka dhacay hoteelka Lafaweyne ee magaalada Muqdisho kaasoo looga hadlayay ammaanka caasimadda Soomaaliya oo ay ka qaybgaleen saraakiil iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir.
"Qofkii dil geysta isna waxaa lagu dilayaa halka uu wax ku dilay," ayuu yiri Jen. Dhego-badan oo sheegay in qofka wax dilay aan loo eegayn inuu tuute xiran yahay iyo inuusan xirnayn, wxuuuna xusay in sharciga uu si isku mid ah u qabanayo.
Taliye ku xigeenka milateriga ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan shaqsiyaad aan la ogeyn cid ay la shaqeeyaan oo dilal, isagoo waxgaradka Muqdisho ku boorriyay inay waddada hagaagsan ku toosiyaan wiilashadoo, halkii markii dambi lagu helo ay dadaal u geli lahaayeen in xukunka uu ka baaqdo.
"Wiilashiinna inaad marka hore ceshataan ayaa la doonayaa... haddii uu dembi galo ayay inta badan waalidiintu u calaacalaan wiilashooda iyagoo ka dhigaya kuwo aan dambi lahayn, taasina ma soconayso... qabiil-qabiilna waa laga gudbay," ayuu yiri Jen. Dhego-badan
Madaxda dowladda KMG ah ayaa horay u sheegay in ruuxii dil geysta lagu xukumi doona halka uu dambiga ku galay isla goobtana sharciga lagu marsiin doono, basle weli ma dhicin in ruux dil geystay lagu dilo halkii uu dilka ku geystay.
Hadalka abaanduulaha ciidamada xoogga Soomaaliya ayaa imaanaya xilli Muqdisho ay ka socdaan howgallo lagu sugayo ammaanka, iyadoo degmooyinka qaarkoodna ay ka dhacayaan dilal qorsheysan.